Ogaden News Agency (ONA) – Somaliya oo qoorta lasii galaysa xadhigii lagu daldali lahaa !!
Somaliya oo qoorta lasii galaysa xadhigii lagu daldali lahaa !!
Posted by ONA Admin	/ December 19, 2013
Kornayl Sanbaloolshi oo ardaydii Somaliyeed ee Kacaankii 21ka Oktoobar la barbaaray ay aad u yaqaanaan ayaa markuu u khudbaynayo ardayda mari doonta dabaaldagga Oktoobar ku odhan jiray – Waxaad halkan u taagan tihiin maanta qofkii caqli lehna wuu garanayaa, midkii doqon ahna looba sheegi mayo -. Odhaahdaa qaaliga ah waxaa maanta isoo xasuusiyay madaxdii ka socotay Somaliya ee Cabdi iley uu ku yeedhi iigu imaada Jigjiga oo ila daawada waxan ay dawladda Itobiya u bixisay Hidar – Dabaaldaga maalinta Qawmiyadaha Itobiya.
Wax lala yaabo ma’aha inay dawladaha dariska ah isku marti-qaadaan xafladaha shacbiga ah, hasa ahaatee ka qaybgalkaasi waa inuu noqdaa mid ku dhisan nidaamka dawliga ah ee layaqaano oo muujinaya brotokoolka loo qaabilo martida dawladaha ajnabiga ah. Waxaa ka mid ah, marka laga yimaado qabilaada iyo soo dhaweynta iyo martigalinta, in ka qaybgalayaasha ajnabiga ah ay ka muuqdaan saxaafada gudaha iyo midka loo gudbinayo caalamka.
Bal hadda aan fiirino saxaafadda ay Itobiya u gudbisay caalamka ay kaga waramayso munaasabadan iyo martida ka soo qaybgashay iyo ujeedada laga leeyahay damaashadka EPRDF ay ugu yeedheen qawmiyadaha Itobiya. Waxay Itobiya sheegtay inay Xafladda fadhiyeen R.wasaaraha Itobiya, M/weynaha Jabuuti, iyo wafdi ka socda Kenya iyo Ruwanda. Sidoo kale inay joogeen madax sare oo ka socota Xukuumadda Itobiya, Wakiilo ka socda Qawmiyadaha Itobiya, iyo dadweynaha dagan magaalada Jigjiga ee martigalisay munaasabaddan. (It was celebrated in the presence of Prime Minister Hailemariam Desalegn, Djiboutian President Ismail Omar Guelleh and government delegates from Kenya and Rwanda. Senior Ethiopian government officials, representatives of Ethiopian nations, nationalities and peoples, as well as residents of the host town, Jigjiga, were also in attendance.) Maxaa halkaa kaaga muuqda? Hadaan kaba soo qaadno inay Itobiya u aqoonsanayn dawlado maamulada, maxaa loo xusi waayay wafdigii ka socda Dawladda Somaliya ee Wasiirka Warfaafinta uu hogaaminayay? Maxuma inuu qofka fahmo qiimigiisa intuu joogo, waxaase ceeb ah qofka inuu isu-haysto waxaan loo aqoonsanayn.
Waxaad si dhab ah uga fahmi kartaa, martida fadhiday goobta kuwa ay yihiin markaad akhriso sharaxa uu ka bixiyay R/wasaaraha Itobiya ujeedada munaasabadda. Wuxuu yidhi; Dastuurkan (oo ah midka loo dabaadagayo), waa miithaaq ka badaandiyay umadda Itobiya inay burburto, oo ah midka isku haya. Sidaa daraadeed waa in aan difaacnaa dastuurkan, oo ah sababta aan isugu nimid halkan. (The constitution is also an oath that salvaged the Ethiopian nation from disintegration and kept it together, the Premier said. We should therefore defend the constitution, which is the basis of this togetherness.). Halkan Ka Akhri.
Maxaad kala soo dhexbaxday hadalka R/wasaaraha Itobiya, adigoo barbardhigaya warbixinta ay dawladda Itobiya u gudbisay caalamka ay ugu sheegtay martida dibadda uga timid ee joogtay munaasabadaa? Khudbadaa R/wasaaraha uu ku sharxay hadafka xafaladda Qawmiyadaha Itobiya iyo xusidda martidii ajnabiga ahayd ee ka soo qaybgalay oo aan lagu darin maamuladii iyo wafdigii Somalida iyo siyaabaha loo fadhiisiyay oo u muuqatay in aan loogu talagalin inay safka hore ee martida fadhiistaan, hasa ahaatee uu Cabdi iley sida la sheegay uu dadkii safka hore fadhiyay kala durjiyay, qaar kale uga baryay in kursi looga kaco sida ku dhacday Siilaanyo oo uu sheegay Eng. Cali Waraabe, waxay intaaba muujinayaan in aanay Itobiya kala soocin qawmiyadaha Itobiya iyo guud ahaan Somalidii meesha joogtay.
Jawaabta ugu saxsan su’aalaha la’iska weydiin karo arimahaa oo aan laga dabatagi doonin waxaa lahaa fanaanka Somaliyeed ee casrigan Amiin Caamir.
Sawirka Amiin wuxuu ku soo bandhigay su’aal uu weydiinayo ninkii ka socday Qawmiyadda Oromada Cabdiraxmaan M. Faroole uu leeyahay; “Goormaad ku soo biirteen Qawmiyadaha Itobiya?” Jawaabta dhabta ah ee Itobiya ay doonayso inay ka dhaadhacdo oy ku qancaan 6da Madaxweyne ee ka socday Somaliya ee munaasabaddaa fadhiyay waa midda uu sheegay fanaanka inuu yidhi C/raxmaan Faroole ee ah; “Wixii ka dambeeyay 1998kii. Laakiin haddaa si rasmi ah nala ogolaaday”. Iyo jawaabta uu bixiyay Siilaanyo markuu yidhi; “Anigaa uga horeeyay 1991 Kuwa kalena way soo socdaan”.
Itobiya shirkaa Jigjiga waxyaaba badan ayay ugu sheegtay Somaalida, hadday caqli leeyihiin oo siduu sheegay Col. Sanbaloolshe garan karaan, haddii kale waa sida ay u haysato Itobiya ee ah inay yihiin Doqomadii uu sheegay Kornayl Sanbaloolshe oo aan loo sheegi doonin.
Qof isaga doonaya inuu is-qarxiyo ninna ma badbaadin karo. Hadalkaa waxaa horey u yidhi Madaxweynihii Mareykanka Mr. Ranalda Reagan. Siyaasi Somaliyeed oo doonaysa inuu Qaranimadii dalkiisa ku iibiyaan waxaan ahay Madaxweynaha X-Land State ninna kama horjoogsan karo.